Entanina ny famakiam-boky ao Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Madiva hifarana sahady ny taom-pianarana 2014-2015, ny manatevina sy manampy hatrany ireny trano famakiam-boky ireny ny CISCO ao Antsirabe. Haren-tsaina mila kolokoloina ny fahalalana entin’ny boky, ka izao fotoana ny fialantsasatra izao indrindra no tokony hanararaotana izany.
Mamaramparana ny taom-pianarana 2014-2015 sahady ny ankamaroan’ireo sekoly ao Vakinankaratra amin’ity herinandro ity. Hifarana ny zoma 17 jolay avokoa ny fanadinana hataon’ireo mpianatra izay tsy miatrika fanadinam-panjakana. Mandeha tsara ihany koa ny karazana torohevitra ho an’ireo hanala fanadinana BAC sy BEPC ary CEPE amin’izao raha ny ao Antsirabe no jerena. Maro ireo filazana alefan’ireo toeram-panofanana amin’ny haino aman-jery sy mipetaka amin’ny rindrina manerana ny tanàna, misarika ny mpanala fanadinam-panjakana mba ho fanampiana azy ireo amin’ny famerenan-desona sady ho fanosehana azy ireo ara-pahaizana. Vao haingana ihany koa no nisokatra tao Antsirabe ny sekoly PRECAES, manofana mpianatra ho tonga mpiasam-panjakana toy ny mpitandro filaminana, ny INFA sy ny ENAM. Manampy isa ny olomanga eto amin’ny firenena avokoa izany rehetra izany. Dieny mbola kely anefa ny ankizy dia efa hatodika bebe kokoa amin’ny vakiboky, mba hivelaran’ny sainy sy hiorim-paka ao aminy ny tena fahaizana sy fahalalana. Hatao fenitra iraisana ho an’ireo sekoly hiadidian’ny CISCO-n’Antsirabe sy ny DREN-n’i Vakinankaratra ny fampitomboana isa ireo karazam-boky isaky ny trano famakiam-boky. Ny boky rahateo no namana mahatoky, hanotofana ny lesoka na amin’ny fomba fiteny am-bava na an-tsoratra, araka ny voalazan’ny mpanabe iray ao amin’ny sekoly La Providence Antsirabe ; manoman-komana ny fialantsasatra ireo mpianatra ao. Mifono haren-tsaina tsy be dia be ny boky ary tsy voatokana ho an’ny mpianatra ihany fa ny rehetra dia afaka manovo fahalalana ao aminy avokoa. Fialamboly aza no hilazan’ireo mpanoratra azy ka amin’izao fialantsasatra izao indrindra no tena fotoana mety. Rehefa tahaka izao volana fiatoana amin’ny fianarana izao, dia mandray vahiny mpialasasatra maro dia maro Antsirabe ka ezahina araka izay ihany koa ny fivohan’ny trano famakiam-boky ao an-toerana raha ny torohevitra natsipin’ny tomponandraikitra sy ny teo anivon’ny CISCO ny Alatsinainy maraina lasa teo tao amin’ny « Lycée André Resampa Antsirabe » na LARA. Antony lehibe hoy ihany izy ireo, mba hamerenana indray amin’ny tontolon’ny fahalalana mari-pototra ireo babon’ny teknolojia vaovao toy ny interinety ka voasariny.
Fitaizana saina ankoatra ny fanatanjahantena
Amin’ny faritra Vakinankaratra, ao Betafo no hanatanterahana ny fanatanjahantena an-tsekoly na ny «Sports scolaires». Natao hitaizana sy hikojakojana ny sain’ny mpianatra ihany koa ity hetsika karakarain’ny DREN ity. Mangatsiaka sady mamirifiry tokoa ny andro amin’izao ka ilaina fatratra ny manafana hozatra alohan’ny hanaovana fanadinana. Mitazona ny fitadidiana ihany koa ny fihinanana tsaramaso, trondro, voanjo izay misy vitaminina D sy E. Ankoatra izay, fitaovana tsotra sy azo antoka ary koa mahomby ny famakiana matetika ireny boky ireny. Tokony tsy hianina fotsiny amin’ny ambaran’ny mpanabe sy ny mpampianatra fa ao anatin’ny boky no mameno ny banga rehetra sy ny tsy ampy. Na dia izany aza, voafaritra ihany ny karazam-boky tsara vakiana, satria misy izy ireny no mamoafady sy mampanita-kevi-dratsy. Na dia vitsy aza izany no mipetraka amina trano famakiam-boky dia miely izay tsy izy tokoa any amin’ny interinety any. Afaka mamolavola olona ho tafita ny fitiavana sy ny fisakaizana amin’ny boky, porofon’izany ny sasantsasany amin’ireo mpanoratra ngezalahy toa an-dRabearivelo Jean Joseph izay nifofotra tamin’izany fotsiny na dia tsy nahatohy fianarana aza. Saingy, mitaky fahazotoana sy faharetana ny fanovozam-pahalalana, fahendrena sy fahaizana aminy. Mora fantatra ihany koa ny olona mpamaky boky sy ny tsy izy, azo tarafina amin’ny fombany sy ny toetrany, ny fihetsiny ary ny zavatra ataony izany. Olon’ny fahendrena no azo hilazana azy fa tsy olon’ny korontan-dava. Aleo miala sasatra mihitsy aloha e!